Xukuumadda Somaliland oo awaamiir ka soo saartay adeegsiga Hirarka Isgaadhsiinta ee dalka - Somaliland Post
Home News Xukuumadda Somaliland oo awaamiir ka soo saartay adeegsiga Hirarka Isgaadhsiinta ee dalka
Xukuumadda Somaliland oo awaamiir ka soo saartay adeegsiga Hirarka Isgaadhsiinta ee dalka
Hargeysa (SLpost)- Wasaaradda Boosaha, isgaadhsiinta iyo Tiknoolajiyadda Somaliland ayaa soo saartay Awaamiir ay ku xadidayso Hirarka ay isticmaalaan Telefiishannada Dalka ka hawl-gala.
Wareegto uu maanta soo saaray Wasiirka Wasaaradda Boosaha, Isgaadhsiinta iyo Tiknoolajiyadda Dr. Cabdiweli Suufi Jibriil ayuu ku sheegay in Shirkadaha bixiya Adeegga Muuq-baahinta ama Telefiishannada looga baahan yahay soo codsadaan inay dib u soo codsadaan diwaangelinta Hirarka ay adeegsadaan.
Wareegtada oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay Wargeyska Geeska Afrika ayaa iyadoo dhamaystiran u qornayd sidan:-
Markaan arkay:- Qodobbada 31-aad, 36-aad iyo 39-aad ee xeerka Boosaha iyo Isgaadhsiinta JSL Xeer Lr. 50/2020
Markaan Arkay:- Qodobbada kala duwan ee Xeer-nidaamiyaha Maamulka Hirarka Isgaadhsiinta Xeer Lr. 05/2020 ee Wasaaraddu soo saartay.
Markaan ogaaday:- baahida loo qabo horumarinta Maamulka Hirarka isgaadhsiinta iyadoo la ilaalinayo Habsami u adeegsiga hirarka astaysan.
Markaan arkay:- in qaabka imika ay Wasaaraddu u bixiso Ruqsadda Hirarka isgaadhsiintu aanay ahayn mid waafaqsan Hab-raacyada Hay’adaha Caalamiga ahi dejiyeen.
Markii aan u kuur-galay:- Qaabka ay dalalka aynu jaarka nahay ee aynu ku wada jirno Gobolka 1-aad ee Hay’adaha Caalamiga ah ee Isgaadhsiinta (ITU) ay u Maamulaan Hirarka Isgaadhsiinta ee Telefiishannnada.
In shirkadaha bixiya adeegga Muuq-baahiyaha ee loo yaqaano (Cable Tv) ay adeegsan karaan ugu badnaan lix (6) Kanaal (Channel) oo Hirarka UHF-ka ah.
In dhammaan shirkadaha bixiya adeegga kor ku xusan dib u soo codsadaan diwaangelinta hirarka ay imika adeegsadaan muddo saddex bilood gudahood ah.
In shirkadaha bixiya adeegga kor ku xusani u hoggaansamaan Xeerarka, Hab-raacyada iyo Tilmaamaha Wasaaraddu soo saarto ee la xidhiidha nooca, awoodda, iyo Tayada Qalabka baahinta iyo horumarka farsamada Casriga ah.
In Wasaaradda iyo shirkaduhu ka wada shaqeeyaan habsami u adeegsiga hirarka isgaadhsiineed ee la xidhiidha adeegsiga Muuq-baahiyaha iyo Farsamada lalinta.
Wakhtiga ay ku hirgelayaan Qodobbada Wareegtadani waa muddo saddex bilood ah.” Sidaas ayaa lagu yidhi wareegtada wasiirka.